ပြားချပ်ချပ် Oblique သော့ချက်နှင့်အတူဒီဇိုင်း sync မှအကောင်းဆုံး ပြားချပ်ချပ် Oblique သော့ချက်နှင့်အတူဒီဇိုင်း sync မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ပြားချပ်ချပ် Oblique သော့ချက်နှင့်အတူဒီဇိုင်း sync
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ပြားချပ်ချပ် Oblique သော့ချက်နှင့်အတူဒီဇိုင်း sync ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - GL-308B
ညှိ tilt ဝင်ရိုးနှင့်အတူထူးခြားတဲ့စနစ်က,0 င်များအကြားချိန်ညှိထောင့်-45 ဒီဂရီ,ပြား Oblique သော့ကူးယူဘို့သင့်လျော်သော
အသစ်တစ်ခုကိုချိန်ညှိ tracer တိကျမှန်ကန်မှုညှိနှိုင်းမှု button ကိုတပ်ဆင်ထား,တစ်ဦးချင်းစီအလှည့်0င်ဖြစ်ပါသည်.02mm,တိမ်အနက်ကိုနေရာချထားနိုင်ပါတယ်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစစ်ဆင်ရေးနှင့်တိကျသောညှိနှိုင်းမှုများအတွက်ညွှန်ပြချက်ချိန်ညှိနေတဲ့ tracer အတိမ်အနက်ကိုတပ်ဆင်ထား
tubular သော့ပွားဖို့အတှကျ adapter နဲ့တပ်ဆင်ထား
တစ်ဦး DC က brushless အင်ဗာတာမော်တာတပ်ဆင်ထား,တိတ်ဆိတ်နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရေး
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.keymachine.com.tw/my/synchronous-tilt-designed-with-flat-oblique-key-1.html
အကောင်းဆုံး ပြားချပ်ချပ် Oblique သော့ချက်နှင့်အတူဒီဇိုင်း sync ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ပြားချပ်ချပ် Oblique သော့ချက်နှင့်အတူဒီဇိုင်း sync ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
multi-စက် duplicating အလုပ်လုပ်တဲ့သော့,နှစ်ဆအမျိုးမျိုးတို့ကိုကူးယူနိုင်ပါတယ်-grooved သော့ဘက်. ကို C တပ်ဆင်ထား/W Tungsten carbide Cutter လမ်းညွှန်ထိန်းညှိခြင်း Dial လွယ်ကူပြင်ဆင်ရေးအပေါ်ရှင်းလင်းမည်အနက်စံကိုက်ညှိ. ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကိုလက်ကိုင်ဘောလုံးကိုဆောင်သော device ကို get,တင်းကျပ်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စစ်ဆင်ရေး. တိကျတဲ့ဒီဇိုင်းမေးရိုးတိကျစွာနည်းနည်းဖြတ်ဖို့ကိုင်တွယ်&နှစ်ဆနည်းနည်းသော့. LED မီးခှကျတပ်ဆင်ထား. အပူတိုက်နယ်အနိုင်အထက်:တိုက်နယ် Overload ဖျူးသောအခြေအနေပေါ်တွင်မဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှောင်ရှားရန်, Power ကိုပိတ်ထား. အသုံးပြုသောမှပေါ့ပါးလွယ်ကူသောနှင့်အတူ. လက်ဝဲ Carriage ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို 128mm သော့နှင့်နှစ်ဆခြမ်း grooved key ကိုမဆိုအမျိုးအစားမှမကုန်မှီတိုင်အောင်ကိုင်ရန်သင့်လိုအပ်ချက်ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်4လမ်း. သငျသညျ groove ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို၏ညာဘက်အနေအထားအပေါ် shouldered သော့နေရာသော့ချက် gauge ကိုသုံးနိုင်သည် သော့ duplicating စဉ်ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကိုသင်ပိုမိုတိကျသောတိုင်းတာတင်ပြ4လမ်းအသစ်ဒီဇိုင်း. ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများလမ်းညွှန်ကိုအောက်တွင်တစ်ခုအပိုကိုပြုပြင်တာတွေဝက်အူသော့ duplicating စဉ်ပျက်စီးခံရဖို့မ Cutter နှင့်ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြောသည်ပါပြီ. ညာဘက် Carriage အဆိုပါဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို 128mm သော့ပွားနှင့်အထူး/အဘယ်သူမျှမပို adapter လိုအပ်ကြောင်းပုံမှန်မဟုတ်သောသော့.ထွ.semi-မြို့ပတ်ရထားသော့ချက်,ရင်ပြင်သော့ချက်,round ရိုးသော့ချက်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:ရှုထောင့်：360 မီလီမီတာ(W က)*310mm(: D)*240mm(H ကို)N ကို.W က.20 ကီလို, G.W က.22 ကီလိုMeas.2.48 CUFT စက်:လူပျိုအဆင့်,1/5 HP110V သို့မဟုတ် 220v,50 Hz သို့မဟုတ် 60 Hz
multi-စက် duplicating အလုပ်လုပ်တဲ့သော့,နှစ်ဆအမျိုးမျိုးတို့ကိုကူးယူနိုင်ပါတယ်-grooved သော့ဘက်. HSS တပ်ဆင်ထားတိုက်တေနီယမ်ဓါးနှင့် Tungsten သံမဏိလွှဓါးချထားတဲ့. လမ်းညွှန်ထိန်းညှိခြင်း Dial လွယ်ကူပြင်ဆင်ရေးအပေါ်ရှင်းလင်းမည်အနက်စံကိုက်ညှိ. ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကိုလက်ကိုင်ဘောလုံးကိုဆောင်သော device ကို get,တင်းကျပ်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စစ်ဆင်ရေး. တိကျတဲ့ဒီဇိုင်းမေးရိုးတိကျစွာနည်းနည်းဖြတ်ဖို့ကိုင်တွယ်&နှစ်ဆနည်းနည်းသော့. LED မီးခှကျတပ်ဆင်ထား. အပူတိုက်နယ်အနိုင်အထက်:တိုက်နယ် Overload ဖျူးသောအခြေအနေပေါ်တွင်မဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှောင်ရှားရန်, Power ကိုပိတ်ထား. အသုံးပြုသောမှပေါ့ပါးလွယ်ကူသောနှင့်အတူ. လက်ဝဲ Carriage ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို 128mm သော့နှင့်နှစ်ဆခြမ်း grooved key ကိုမဆိုအမျိုးအစားမှမကုန်မှီတိုင်အောင်ကိုင်ရန်သင့်လိုအပ်ချက်ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်4လမ်း. သငျသညျ groove ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို၏ညာဘက်အနေအထားအပေါ် shouldered သော့နေရာသော့ချက် gauge ကိုသုံးနိုင်သည် သော့ duplicating စဉ်ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကိုသင်ပိုမိုတိကျသောတိုင်းတာတင်ပြ4လမ်းအသစ်ဒီဇိုင်း. ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများလမ်းညွှန်ကိုအောက်တွင်တစ်ခုအပိုကိုပြုပြင်တာတွေဝက်အူသော့ duplicating စဉ်ပျက်စီးခံရဖို့မ Cutter နှင့်ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြောသည်ပါပြီ. ညာဘက် Carriage အဆိုပါဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို 128mm သော့ပွားနှင့်အထူး/အဘယ်သူမျှမပို adapter လိုအပ်ကြောင်းပုံမှန်မဟုတ်သောသော့.ထွ.semi-မြို့ပတ်ရထားသော့ချက်,ရင်ပြင်သော့ချက်,round ရိုးသော့ချက်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:ရှုထောင့်：360 မီလီမီတာ(W က)*310mm(: D)*240mm(H ကို)N ကို.W က.20 ကီလို, G.W က.22 ကီလိုMeas.2.48 CUFT စက်:လူပျိုအဆင့်,1/5 HP110V သို့မဟုတ် 220v,50 Hz သို့မဟုတ် 60 Hz
Key ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Duplicate
အဆိုပါ GL-750 key ကိုစက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သော့ပြင်လုပ်ငန်းများအတွက်လိုင်းဆလင်ဒါ key ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အပေါ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစံမော်တော်ဆိုင်ကယ် / ကားဆလင်ဒါ keys တွေကိုနှင့် cruciform keys တွေကိုအပါအဝင်အများဆုံးဆလင်ဒါ keys ကိုဖြတ်မည်။ ဒီမော်ဒယ်တုနှိုတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကယ်တင်တတ်၏။ အဆိုပါ 4-လမ်းမေးရိုး 120mm key ကိုနှစ်ချက်ဘက် grooved key ကိုမဆိုအမျိုးအစားမှမကုန်မှီတိုင်အောင်ကျင်းပရန်သင်တို့အလိုရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည် ထိုရထားပြုစုပျိုးထောင်သို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းဖြင့် activated အပေါ်-off Micro-switch ကိုထိန်းချုပ်ထားအလိုအလျောက်အာဏာ။ key ရဲ့တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့သော့များဖြတ်တောက်ရသောအခါလုံလောက်သောဖိအားပေးရထားဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ စက်ဒီဇိုင်းအတွင်း၌ဆီမီးခွက်ကိုတိုက်ရိုက်ရထားနှင့် vise မေးရိုး၏မျက်နှာပြင်အလင်းပေးနိုင်သည်။ V ကို type ကိုထောင့်ရှုးတပ်ဆင်ထား။ သော့များ duplicating စဉ်ပျက်စီးခံရဖို့မရှုးနှင့်မေးရိုးကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရသောလမ်းညွှန်ကိုအောက်တွင်အပိုက​​ိုပြုပြင်တာတွေဝက်အူ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:ရှုထောင်: 330 မီလီမီတာ (W) * 370mm (ဃ) * 290mm (H)ဘ 20 ကီလိုGW 22 ကီလိုMeas ။ 2.48 Cuft မော်တော်: လူပျိုအဆင့်, 1/5 HP, RPM 1720110V သို့မဟုတ် 220v, 50 Hz သို့မဟုတ် 60 Hz
အဆိုပါမိတ္တူပွားထိုကဲ့သို့သောလူကြိုက်များဘေးကင်းလုံခြုံသိုက်နှင့်အံဆွဲသော့ခလောက်နှင့်အတူအသုံးပြုသူတို့အားအဖြစ် "flat" သော့မြား, duplicating များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဖြိုက်နက် carbide ပစ္စည်းလွှ slotting တပ်ဆင်ထား။ မည်သည့်အရှည်၏ပြားချပ်ချပ်သော့ bitted လီဗာ & ဘက်ခြမ်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သော့ "ကို arc" ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နယူးဒီဇိုင်း vise မေးရိုး duplicating များအတွက်အလွယ်တကူခလုတ်လှည်။ အလွန်အမင်းတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ထိရောက်မှု။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:ရှုထောင်: 300 မီလီမီတာ (W) * 300mm (ဃ) * 320mm (H)ဘ: 14 ကီလို GW: 16 ကီလိုMeas ။ 2.48 CUFTမော်တော်: 110V သို့မဟုတ် 220v, 50 Hz သို့မဟုတ် 60 Hz
ညှိ tilt ဝင်ရိုးနှင့်အတူထူးခြားတဲ့စနစ်က,0 င်များအကြားချိန်ညှိထောင့်-45 ဒီဂရီ,ပြား Oblique သော့ကူးယူဘို့သင့်လျော်သော ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစစ်ဆင်ရေးနှင့်တိကျသောညှိနှိုင်းမှုများအတွက်ညွှန်ပြချက်ချိန်ညှိနေတဲ့ tracer အတိမ်အနက်ကိုတပ်ဆင်ထား အသစ်တစ်ခုကိုအီလက်ထရောနစ်မော်တာမြန်နှုန်းညွှန်ပြချက်တပ်ဆင်ထား,အလုပျသမားမြား၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အညီသင့်လျော်သောမော်တာမြန်နှုန်းကိုချိန်ညှိ လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး-စမတ်ထိန်းချုပ်မှုလျှော,အထူးမြွေများအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့် grooved သော့. ဒီ button ကိုသော့ခတ်,သော့ချက် groove မှလာမယ့်,အလိုအလျောက်မော်ဒယ်လ်များ၏ elastic အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့built-လွယ်ကူသောမိတ္တူပွားဘို့ tubular key ကိုညှပ် Point အတွက် တစ်ဦး DC က brushless အင်ဗာတာမော်တာတပ်ဆင်ထား,တိတ်ဆိတ်နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရေး တစ်လေးလုံးတပ်ဆင်ထား-လွယ်ကူစွာများအတွက်ဇယားကွက်ကြိတ်ခုတ်ခြင်းနှင့် tracers ကရိယာ
key ကိုစက် duplicating ဘက်စုံသုံး
သော့ဖြတ်တောက်တူးဖော်ခြင်းနှင့်မြွေ groove ကူးယူဘို့သင့်လျော်သော,ထိုကဲ့သို့သော KABA အဖြစ်,KESO,Benz…စသည်တို့ကို အသစ်တစ်ခုကိုချိန်ညှိ tracer တိကျမှန်ကန်မှုညှိနှိုင်းမှု button ကိုတပ်ဆင်ထား,တစ်ဦးချင်းစီအလှည့်0င်ဖြစ်ပါသည်.02mm,တိမ်အနက်ကိုနေရာချထားနိုင်ပါတယ် လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး-စမတ်ထိန်းချုပ်မှုလျှော,အထူးမြွေများအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့် grooved သော့, ဒီ button ကိုသော့ခတ်,သော့ချက် groove မှလာမယ့်,အလိုအလျောက်မော်ဒယ်လ်များ၏ elastic အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့built-လွယ်ကူသောမိတ္တူပွားဘို့ tubular key ကိုညှပ် Point အတွက် တစ်ဦး DC က brushless အင်ဗာတာမော်တာတပ်ဆင်ထား,တိတ်ဆိတ်နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရေး လွယ်ကူသောစံကိုက်ညှိပရိသတ်အဘို့သစ်တစ်ခုအမြန်လွှတ်ပေးရန်ကရိယာတပ်ဆင်ထား အသစ်အဖြိုက်နက်သံမဏိခုတ်တပ်ဆင်ထား
ညှပ်၏ညှိလှည့်ဒီဇိုင်းကိုလှည့်ပတ် SB သော့နဲ့တူချိုနှင့်အတူလှည့်လည်သော့ဖြတ်ဖို့သုံးနိုငျ.multi-အလုပ်လုပ်တဲ့ key ကိုညှပ်ဘုံပြားချို key ကိုသုံးနိုင်တယ်&မွှေ/KABA တူသောသော့ဖြတ်တောက်ပရိုဖိုင်းကို,KESO&-Benz. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစစ်ဆင်ရေးနှင့်တိကျသောညှိနှိုင်းမှုများအတွက်ညွှန်ပြချက်ချိန်ညှိနေတဲ့ tracer အတိမ်အနက်ကိုတပ်ဆင်ထား အသစ်တစ်ခုကိုအီလက်ထရောနစ်မော်တာမြန်နှုန်းညွှန်ပြချက်တပ်ဆင်ထား,အလုပျသမားမြား၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အညီသင့်လျော်သောမော်တာမြန်နှုန်းကိုချိန်ညှိ နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းနှင့်အသစ်လေးခုတပ်ဆင်ထားပြီး-တဖက်သတ်ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို,သော့ချက်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်.,လေးယောက်ရှိပါတယ်-တဖက်သတ်,လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီရွေးချယ်ထားသည့်နိုင်သည့်,လှည်,နှင့်ပိုပြီးချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်. တစ်ဦး DC က brushless အင်ဗာတာမော်တာတပ်ဆင်ထား,တိတ်ဆိတ်နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရေး လွယ်ကူသောစံကိုက်ညှိပရိသတ်အဘို့သစ်တစ်ခုအမြန်လွှတ်ပေးရန်ကရိယာတပ်ဆင်ထား
အသစ်တီထွင်လေး-လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူဆုပ်ကိုင်ထားမှုကိုလှည့်နှင့်အဓိက slotting ဘက်multi-အလုပ်လုပ်တဲ့ key ကိုညှပ်ဘုံပြားချို key ကိုသုံးနိုင်တယ်&မွှေ/KABA တူသောသော့ဖြတ်တောက်ပရိုဖိုင်းကို,KESO&-Benz. အသစ်တစ်ခုကိုချိန်ညှိ tracer တိကျမှန်ကန်မှုညှိနှိုင်းမှု button ကိုတပ်ဆင်ထား,တစ်ဦးချင်းစီအလှည့်0င်ဖြစ်ပါသည်.02mm,တိမ်အနက်ကိုနေရာချထားနိုင်ပါတယ် အသစ်တစ်ခုကိုအီလက်ထရောနစ်မော်တာမြန်နှုန်းညွှန်ပြချက်တပ်ဆင်ထား,အလုပျသမားမြား၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အညီသင့်လျော်သောမော်တာမြန်နှုန်းကိုချိန်ညှိ နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းနှင့်အသစ်လေးခုတပ်ဆင်ထားပြီး-တဖက်သတ်ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို,သော့ချက်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်.,လေးယောက်ရှိပါတယ်-တဖက်သတ်,လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီရွေးချယ်ထားသည့်နိုင်သည့်,လှည်,နှင့်ပိုပြီးချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်. တစ်ဦး DC က brushless အင်ဗာတာမော်တာတပ်ဆင်ထား,တိတ်ဆိတ်နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရေး လွယ်ကူသောစံကိုက်ညှိပရိသတ်အဘို့သစ်တစ်ခုအမြန်လွှတ်ပေးရန်ကရိယာတပ်ဆင်ထား အသစ်အဖြိုက်နက်သံမဏိခုတ်တပ်ဆင်ထား ရှုထောင့်：280 မီလီမီတာ(W က)*385mm(: D)*415mm(H ကို)N ကို.W က.18 ကီလို, G.W က.20 ကီလိုMeas.3.2 CUFT စက်: rpm 6500~12000100V~230V 50 Hz/60 Hz